ကလေးငယ်(၁၃)ယောက်ကို မိုးကုန်မှဖြစ်နိုင်မယ်လို့တွက်ဆဟန်တူပါတယ် – ဒေါက်တာထွန်းလွင်
ဂူထဲပိတ်မိနေတဲ့ ကလေးငယ်(၁၃)ယောက်ကို ကယ်ထုတ်ဖို့ အချိန် (၄)လလောက်လိုလိမ့်မယ်လို့ CNN သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ သတင်းပင်ရင်းကတော့ ထိုင်အာဏာပိုင်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရလို့သိရ ပါတယ်။
(၄)လကို ဘယ်လိုတွက်ယူသလည်း ?
ထိုင်းကလေးတွေကယ်ဖို့အရေးမှာ အဓိကပြဿနာက ဂူထဲမှာ ၀င်နေတဲ့ ရေတွေကို ဖြတ်သယ်ဖို့ ကိစ္စပဲ။ ရေတွေကို စုပ်ယူပစ်ဖို့လည်း စဉ်းစားနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးတွင်းကာလ(အနောက်တောင်မုတ်သုံရာသီကာလ)ဖြစ်နေတော့ မိုးများတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့် မိုးတွေအဆက်မပြတ်ရွာနေရင် ရေတွေကုန်ဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒီတော့ ရေတွေ ဂူထဲမ၀င်အောင် မိုးကုန်မှဖြစ်မယ်လို့တွက်တယ်ထင်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မုတ်သုံမိုးရာသီဟာ အောက်တိုဘာလကုန်မှ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဇူလိုင်လကနေတွက်ရင် အောက်တိုဘာလကုန်အထိ လေးလကြာဦးမှာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် မိုးအကုန်ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလအကုန် နိုဝင်ဘာလမှ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ လေးလလောက်ကြာဦးမယ်လိုက ထုတ်ပြန်တာဖြစ်မလို့ ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။
(မျတ်ချက်၊ ဒီကြားထဲမှာ နည်းပညာအကူအညီနဲ့ ပိုမြန်ဆန်အောင်လည်းကယ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်၊ မက္ကဆီကိုတုန်းကတော့ အပေါ်အောက် ကျင်းတူးပြီး လှောင်အိမ်နဲ့ တစ်ယောက်ချင်း အပေါ်ဆွဲထုတ်ပြီး ကယ်ဘူးပါတယ်)
ဂူထဲပိတျမိနတေဲ့ ကလေးငယျ(၁၃)ယောကျကို ကယျထုတျဖို့ အခြိနျ (၄)လလောကျလိုလိမျ့မယျလို့ CNN သတငျးမှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။ သတငျးပငျရငျးကတော့ ထိုငျအာဏာပိုငျရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအရလို့သိရ ပါတယျ။
(၄)လကို ဘယျလိုတှကျယူသလညျး ?
ထိုငျးကလေးတှကေယျဖို့အရေးမှာ အဓိကပွဿနာက ဂူထဲမှာ ဝငျနတေဲ့ ရတှေကေို ဖွတျသယျဖို့ ကိစ်စပဲ။ ရတှေကေို စုပျယူပဈဖို့လညျး စဉျးစားနကွေတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိုးတှငျးကာလ(အနောကျတောငျမုတျသုံရာသီကာလ)ဖွဈနတေော့ မိုးမြားတဲ့ဒသေဖွဈတာကွောငျ့ မိုးတှအေဆကျမပွတျရှာနရေငျ ရတှေကေုနျဖို့မလှယျဘူး။ ဒီတော့ ရတှေေ ဂူထဲမဝငျအောငျ မိုးကုနျမှဖွဈမယျလို့တှကျတယျထငျပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံရဲ့မုတျသုံမိုးရာသီဟာ အောကျတိုဘာလကုနျမှ ကုနျဆုံးမှာဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှိ ဇူလိုငျလကနတှေကျရငျ အောကျတိုဘာလကုနျအထိ လေးလကွာဦးမှာဖွဈတယျ။
ဒါကွောငျ့ မိုးအကုနျဖွဈတဲ့အောကျတိုဘာလအကုနျ နိုဝငျဘာလမှ ကယျဆယျရေးလုပျငနျးတှေ လုပျနိုငျမှာဖွဈလို့ လေးလလောကျကွာဦးမယျလိုက ထုတျပွနျတာဖွဈမလို့ ကြှနျတျောတှေးမိပါတယျ။
(မတျြခကျြ၊ ဒီကွားထဲမှာ နညျးပညာအကူအညီနဲ့ ပိုမွနျဆနျအောငျလညျးကယျနိုငျဖို့ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ၊ မက်ကဆီကိုတုနျးကတော့ အပျေါအောကျ ကငျြးတူးပွီး လှောငျအိမျနဲ့ တဈယောကျခငျြး အပျေါဆှဲထုတျပွီး ကယျဘူးပါတယျ)